यस वसन्तको लागि रaring्गीन संयोजन संयोजन | बेजिया
मारिया vazquez | 26/04/2021 18:00 | मैले के लगाउने?
हामीमध्ये धेरैजना छन् जसले हाम्रो दैनिक आउटफिटहरू सिर्जना गर्न तटस्थ र colors्गलाई एक ठूलो सहयोगी पाउँछन्। यसले हामीलाई सोच्न को लागी बिभिन्न कपडाका साथ धेरै सजिलै संयोजनहरू सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ। जे होस्, त्यहाँ सधैं छन् जो त्यहाँ छन् जोखिम गर्न तयार।
एमिली सिन्डलेभ, लियोनी हन्ने, इलेना गियाडा र ब्लेयर एडी रंग मात्र डराउँदैनन् तर उनीहरूलाई आफ्नो चिह्नको रूपमा बनाएका छन्। र तिनीहरूको इन्स्टाग्राम खाताहरूमा एक हेराई गरेर हामी सिर्जना गर्न प्रेरित गर्न सक्छौं यो वसन्त सेक्सी संयोजन।
र thingको साथ त्यो कुरा हुन्छ जुन त्यस कपडाको साथ प्रयोग गर्दछ जुन हामी प्रयोग गर्दैनौं र एक दिन हामीले किनेको निर्णय गर्यौं। पहिलो केहि पटक हामी यसलाई प्रयोग गरेर आफूलाई धेरै अनौंठो भेट्नेछौं; पछि, हामी उनी कहाँ जान्छौं। आँखा शिक्षा दिनु हामीले के गर्नु पर्छ। यो समावेश गरेर सुरू हुन्छ प्लगइनहरूको माध्यमबाट यसको विपरित र त्यहाँबाट अगाडि बढ्नुहोस् यदि तपाईं धेरै विश्वस्त हुनुहुन्न भने।
तर हामी त्यस बिन्दुमा जान्छौं, ती संयोजनहरू जुन हामीलाई यस वसन्तमा रंगसँग जोखिम लिन आमन्त्रित गर्दछ। हाम्रो मनपर्नेहरू मध्ये एक फाराम हो fuchsia र हरियो। तपाईं हरियो को बिभिन्न छराहरूका बीच छनौट गर्न सक्नुहुनेछ, यद्यपि हामी मद्दत गर्न सक्दैनौं तर पहेंलो सागका लागि हाम्रो भविष्यवाणी देखाउँदछ।
सुन्तला र निलो हाम्रो दोस्रो प्रस्ताव बनाउनुहोस्। यो एक धेरै साहसी संयोजन हो, यदि एमिली जस्तै तपाईले धेरै गहन स्वरमा कपडाहरूको संयोजन गर्न शर्त लगाउनुहुन्छ जुन नरम गर्न सजिलो छ। कसरी? Giada जस्तै पेस्टल टोनमा निलो वस्त्रहरू छनौट गरेर।
तपाईं पनि संयोजन गर्न सक्नुहुन्छ सुन्तला र बिलाम। लिलाकले भर्खरको वसन्त-ग्रीष्मकालीन संग्रहहरूमा अग्रणी भूमिका खेलेको छ र जारी रहनेछ। यो एक र color्ग हो जुन दुबै तातो र चिसो टोनसँग धेरै राम्रोसँग काम गर्दछ। तपाईं यस दुबै पहेंलो र फुसिया सँग जोड्न सक्नुहुन्छ यस वसन्त dतुमा हिम्मत रंग संयोजनहरू सिर्जना गर्न।
छविहरू - @leoniehanne, @ एलेनागियाडा, @alexandrapereira, @marianamachado____, @emilisindlev, @joanavaz_, @blaireadiebee
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » फेसन » मैले के लगाउने? » यस वसन्तको लागि बोल्ड रंग संयोजन
केटोजेनिक खाना, केटो आहारको बारेमा तपाईंलाई थाहा पाउनुपर्ने सबै चीज